Custom warqad yar, Custom Decal, Custom ASTAANTA, Custom Birta warqad yar - Ever Greater
Custom vinylalkohol sticker
Custom vinylalkohol Decal
Custom wadini warqad yar (Epoxy ama PU)
Birta warqad & biraha Nameplate
sticker Electron-sameeyay (Nikkel sticker)
ASTAANTA & Badge
3D Chrome / calaamad Nikkel
PVC qaboojiyaha Magnet & Magnet baabuur
Bilada, Pin calaamad, silsilad muhiim ah birta & farsamada birta
Waxaan horumariyo 1000 ee designs.We heysanaa koox ka mid ah samaynta sugitaanka si aad u maqashid requirements.Just noo soo sheeg waxa aad u baahan tahay, waxa uu la isticmaalo, iyo marka aad u baahan by, iyo waxaan ka heli doonaa xaqa u sheegay!
Si loo horumariyo sticker ugu fiican ee aad khubaro sticker our si dhow ula kooxda shaqayn doona si loo hubiyo in design ah kulan dhamaadka result.With waayo-aragnimo ka badan 20 sano aan ku samayn doonaan si hufan oo effectively.You tirin karaa, Nagu soo!
Gudbinta Mashruuca inoo ah ma ahan oo kaliya oo ku saabsan kuu dirayaa gool shipment.Our ah waa in la hubiyo natiijada Fina dhacaya sida aad malayn it.We yabooho in natiijooyin wanaagsan, si degdeg ah, oo la isku halayn karo inta lagu guda jiro marxalad kasta ee mashruuca.
At abid, stickers tahay hamiday.
kuwa Big, kuwa yar yar, kuwa funny, kuwa halis ah, waxaan samayn all.Need wax marnaba sameeyey ka hor? waxaa gacanta si veterans warshadaha us.As iyadoo in ka badan 25 sano oo waayo-aragnimo, waxaa tahay ku dhawaad ​​ma stickers ma aannu dhigay .
Waxaan bixinaa tiro balaadhan oo ah qalabka iyo teknoolajiyada gaar ah si ay u doortaan from.Just xiriiri pros sticker iyo waxay maksure doonaa waxaad ka heli stickers ugu fiican ee aad u baahan tahay, oo aad rabto.
3D chrome calaamad & Label Nikkel
Badge & ASTAANTA
Wadini sticker PU ama sticker Epoxy
Bilada, keychain Birta & farsamada birta
Our Project Recent
Waxaan la Miranda Wang shaqeyneysey tan iyo 2009-kii, iyada ayaa mar kale waqti iyo waqti muujiyeen iyada daacadnimada dhab ah oo la jecel yahay isha ku haya inuu iiga adeego macaamiisha ah daacad iyo samatabbixin waxyaabaha waqtiga iyo miisaaniyadda. Waxaan kal iyo laab ah kugu dhiirrigelin kara in ay oggolaadaan in Miranda fursad lagu muujinaayo in aad si shakhsi ah sida iyada iyo kooxda laga yaabaa inay awoodaan inay kaa caawiyaan inaad xal il aad buisness. Waxaan noqon lahaa ku faraxsanahay in aad la xiriiri shakhsi si loo xaqiijiyo aan talo
Tayada marna waa shil. Waa natiijada dadaal caqli. Waan garanayaa Miranda markii qaar ka mid ah hadda iyo iyada iyo kooxda Ever Greater tusaale wax walba oo aan u fiirsado in a soo saaraha Chinese awood. Waxaan ahay ku faani inuu iyaga ugu yeedho "-hawlgalayaasha aan isku halleeyey"
Abdel - Eastheimer Caalamiga ah ee Hong Kong
Waxaan la soo shaqeeyay Miranda on mashaariic kala duwan ka badan dhowrkii sano ee la soo dhaafay oo aan si dhab ah u oran karaa in iyadu waa ii farxad inaan la shaqeeyo laakiin mid ka mid ah xirfadlayaasha ugu wareegay on oo hufan waxaan guud ahaan iman ma aha oo kaliya. Haddii aad si toos ah iyada la shaqeeyaan koox ama haddii aad iyada la shaqeeyaan awoodda qayblibaaxna / gadashada ah, ayay helo alaabtii sameeyo oo had iyo jeer u muuqataa in ay la timaado hab cusub si aad u hesho la soo dhaafay dhibaato. Waxaan aad ugu boorinayna la Miranda shaqada iyo ballan qaadi karno wax ka qabashada iyada ama shirkad iyada kula jiri doonaa waayo-aragnimo ah oo siman oo kaaftoomi-free.
Waxaad Shirkadda Ganacsiga Caalamiga ah